India Visa Visa | I-Visa Yabavakashi Base-Inthanethi YaseNdiya
I-India Visa yabaseMelika
I-India Visa Yezakhamizi zaseBrithani
I-India Visa Yezakhamizi zaseCanada
I-India Visa Yezakhamizi zase-Australia
I-India Visa Yezakhamizi zaseFrance
Ukubuka konke kolwazi nge-eVisa
Ukubuka konke kwe-eVisa
Izidingo ze-Visa zaseNdiya
Izidingo ze-Indian Medical Visa
Amachweba Avumelekile Wokungena
Amachweba Avumelekile Okuphuma
Abahamba Ngezikebhe Zohambo
Izidingo zeVisa ngePhasiphothi
Thola i-India Visa Online
Yini India Visa Isicelo
Inqubo Yokufaka Isicelo ye-Visa -
Abahambi bebhizinisi leVisa
Amathiphu wokugwema ukwenqatshwa kweVisa
Izidingo ze-Visa Photo
Izidingo Zepasipoti yeVisa
Ukufaka isicelo seVisa kusuka e-USA
Indian Visa Yezakhamizi zaseBrithani
Ukufika esikhumulweni sezindiza i-Delhi
Eminye Imibhalo »
I-India Online Visa Ibuyiselwe
Ukugoma Kwezivakashi zaseNdiya
Uhlu lwama-Embasses aseNdiya
Amanxusa angaphandle eNdiya
Inqubomgomo ye-Visa ye-OCI
Inqubomgomo yeVisa ezinganeni
Inqubomgomo ye-COVID-19 Visa
India Visa Visa
Abahambi abaya e-India inhloso yabo ukubona / ukuzijabulisa, ukuhlangana nabangane nezihlobo noma i-Short Term Yoga Program badinga ukufaka isicelo se-India Tourist Visa ngohlobo lwe-elektroniki, olwaziwa nangokuthi yi-eTourist Visa for India.
I-Visa yabavakashi yeNdiya iyatholakala kulabo abavakashela ukuvakasha kweNdiya isikhathi esingadluli kowe-180 (izinsuku eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili) ngasikhathi.
Abahambi abaya eNdiya bafanelekile ukufaka isicelo se-an I-Visa yaseNdiya online kule webhusayithi ngaphandle kokuvakashela Inxusa LaseNdiya lasendaweni. Inhloso yohambo kumele kungabi okuthengiswayo ngokwemvelo.
Le Visa yabavakashi baseNdiya ayidingi isitembu esibonakalayo epasipoti. Labo abazofaka isicelo seVisa loMvakashi waseNdiya kule webhusayithi bazonikezwa ikhophi le-PDF ye-Indian Tourist Visa ezothunyelwa nge-imeyili nge-imeyili. Cishe ikhophi elithambile lale Visa yabavakashi baseNdiya noma ukuphrinta iphepha kuyadingeka ngaphambi kokuqala ukuhamba ngendiza / uhambo oluya e-India. IVisa enikezwa isihambi iqoshwa ohlelweni lwekhompyutha futhi ayidingi isitembu somzimba epasipoti noma eposini yepasipoti eya kunoma yiliphi ihhovisi le-Visa laseNdiya.
Ingasetshenziselwa ini i-Visa Yabavakashi BaseNdiya?
I-India Tourist Visa noma i-eTourist Visa ingasetshenziselwa izinhloso ezilandelayo:
Uhambo lwakho olokuzijabulisa.
Uhambo lwakho ukubona.
Uza ukuhlangana namalungu omndeni nezihlobo.
Uvakashela eNdiya ukuhlangana nabangane.
Uhambela uhlelo lwe-Yoga / e.
Uhambela izifundo ezingeqi ezinyangeni eziyi-6 futhi wenza izifundo ezinganikezi idigri noma isitifiketi sediploma.
Uza umsebenzi wokuzithandela ongafika enyangeni eyi-1 ubude.
Le Visa iyatholakala futhi online njenge-eVisa India ngokusebenzisa le webhusayithi. Abasebenzisi bayakhuthazeka ukuthi bafake isicelo online kule India Visa eku-inthanethi kunokuvakashela i-Indian Embassy noma i-Indian High Commission ukuze kube lula, ukuphepha nokuphepha.
Ungahlala isikhathi esingakanani eNdiya nge-eTourist Visa?
Kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo ngale Visa Yezokuvakasha yaseNdiya etholakala kubavakashi ngokwesilinganiso sobude besikhathi manje. Itholakala ngezikhathi ezintathu kusukela ngo-2020:
Usuku lwe-30: Ivumelekile izinsuku ezingama-30 kusuka ngosuku lokungena eNdiya futhi isebenza ngokusemthethweni ukungena kabili.
Unyaka 1: Ivumelekile izinsuku ezingama-365 kusuka ngosuku lokukhishwa kwe-eTA futhi iyi-Visa yokufaka eminingi.
Iminyaka emi-5: Isebenzayo iminyaka emi-5 ukusuka ngosuku lokukhishwa kwe-eTA futhi iyi-Visa yokufaka eminingi.
Ukuqina kosuku lwe-30 i-India Visa kungaphansi kokuphazamiseka okuthile. Ungafunda ngokuchazwa kwe-Visa Yezinsuku Zokuvakasha ezingama-30.
Qaphela: Bekukade kukhona i-Visa Yezinsuku ezingama-60 ukuya eNdiya etholakala ngaphambi kuka-2020, kodwa selokhu yanqatshelwa.
Yini Izidingo zeVisa Abavakashi baseNdiya?
I-Visa yabavakashi idinga imibhalo engezansi.
Ikhophi yombala eskenisekisiwe yekhasi lokuqala (le-biographical) lephasiphothi yabo yamanje.
Isithombe sombala wepassport wesitayela sakamuva.
Ukuqinisekiswa kwepasipoti yezinyanga ezi-6 ngesikhathi sokungena eNdiya.
Yini amalungelo kanye nezimfanelo ze-India Visa wabavakashi?
Lokhu okulandelayo izinzuzo ze-Visa yabavakashi baseNdiya:
I-Visa Yezinsuku Zokuvakasha ezingama-30 ivumela ukungena kabili.
Unyaka ongu-1 neminyaka engu-5 i-Visa yabavakashi ivumela okufakiwe okuningi.
Abaphethe bangangena eNdiya besuka kwesinye sezikhumulo sezindiza ezingama-28 namachweba amahlanu. Bona uhlu olugcwele lapha.
Abaphethe i-Visa Yezindiza ZaseNdiya bangaphuma eNdiya kunoma yikuphi okuthunyelwe okuvunyelwe kokufika kwabokufika okuvunyelwe lapha (India). Bona uhlu olugcwele lapha.
Ukulinganiselwa kweVisa yabavakashi baseNdiya
Lezi zingqinamba ezilandelayo zisebenza kwi-Indian Visa yabavakashi:
I-Visa Yezinsuku zabavakashi ezingama-30 kuphela i-Visa yokungena kabili.
I-Visa yoMvakashi Wonyaka ongu-1 ne-5 isebenza ngokusemthethweni ngezinsuku eziyi-180 zokuhlala njalo eNdiya.
Lokhu uhlobo lwe-visa ayiguquki, ayikwazi ukudlulisa futhi ayinwebeki.
Abafakizicelo bangacelwa ukuthi banikeze ubufakazi bezimali ezanele zokuzixhasa ngenkathi behlala eNdiya.
Izicelo zingacelwa ukuthi zinikeze ithikithi lokuqhubekela phambili noma ithikithi lokubuya ku-Visa Yezindiza ZaseNdiya.
Bonke abafakizicelo kumele babe nephasiphothi ejwayelekile, ezinye izinhlobo zamaphasipoti asemthethweni awamukelwa.
IVisa yabavakashi baseNdiya ayivumelekile ukuhambela izindawo ezivikelwe, ezivinjelwe kanye nezindawo ezigcinwa kuyo amasosha.
Uma iphasiphothi yakho iphelelwa yisikhathi ngaphansi kwezinyanga eziyisithupha kusukela ngosuku lokufakwa, khona-ke uzocelwa ukuba uvuselele ipasipoti yakho. Kufanele ube nezinyanga eziyi-6 zokuvunyelwa kwephasiphothi yakho.
Ngenkathi ungadingi ukuvakashela inxusa laseNdiya noma i-Indian High Commission nganoma yisiphi isitembu se-Visa yabavakashi base-India, udinga amakhasi amabili angenalutho kwipasipoti yakho ukuze isikhulu sezokufika sikwazi ukubeka isitembu esizosuka esikhumulweni sezindiza.
Awukwazi ukuza ngomgwaqo oya e-India, uvunyelwe ukungena nge-Air and Cruise ku-India Visa yabavakashi.
Yenziwa kanjani i-Payment for India Tourist Visa (iTourist Indian Visa)?
Izivakashi zingenza lokukhokha ye-India Visa yabo yabavakashi besebenzisa isheke, ikhadi le-Debit, ikhadi lesikweletu noma i-akhawunti ye-PayPal.
Izidingo eziphoqelekile ze-India Tourist Visa yilezi:
Ipasipoti esebenza izinyanga eziyi-6 kusukela ngosuku lokuqala ukufika eNdiya.
I-ID ye-imeyili esebenzayo.
Amandla we-Debit Card noma iKhadi leSikweletu noma i-Akhawunti yePaypal yokukhokha okuphephile ku-inthanethi kule webhusayithi.
Qinisekisa ukuthi uhlolile ukufaneleka kwe-eVisa yakho yaseNdiya.
Izakhamizi zase-United States, Izakhamizi zase-United Kingdom, Izakhamizi zaseCanada futhi Izakhamizi zaseFrance can Faka isicelo online ku-India eVisa.
Uyacelwa ukuthi ufake isicelo se-Visa Yezokuvakasha i-India izinsuku ezingama-4-7 ngaphambi kwendiza yakho.
Faka isicelo se-Visa yabavakashi
I-eVISA INDIA ULWAZI
AMAZWE EVISA ELIGIBILE
I-eVISA VISITOR ULWAZI
IZIMFUNO ZE-EVISA IZITHOMBE
ISIMEMO SE-VISA PASSPORT
AMA-PORTS ATHOLAKALAYO WOKUGCINA
AMALUNGISELELO ATHUNYIWEYO WOKUQhamuka
IMIHLA EYENZIWA YOKUVIVA
I-VISA YASENDABENI EPHUTHUMAYO
AMathiphu WOKUVULA IVISA UKWENZA
Abashushumbisi beVISA BASEKHAYA
ISIQINISEKISO SE-EVISA APPLICATION
HLOLA INDIA eVISA
Ukufaka isicelo se-eVISA KUSUKA E-USA
IZIKHUMBUZO EZADUMAYO ZASENDIYA
IBANDHARVGARH PARK KAZWELONKE
ONKULUNKULU IZWE LAKHE KERALA
UKUDLA OKUDUMILE KWE-INDIA
KUFANELE BHEKE IZINDAWO ZEGUGU LE-UNESCO
UKUVUKA UTAJ MAHAL
QAPHELA ISIQONDISO ESIYA EGOLA
I-North EAST INDIA
ISIQONDISO SE-MUMBAI TRAVEL
IBHALISELWE I-TAMIL NADU
RANN OF KUTCH IHLANE ELIMHLOPHE
I-ANDAMAN NE-NICOBAR ISLANDS
© copyright ngu- www.india-visa-online.com
Ukuzikhulula: IVisa yaseNdiya ekhishwe yile webhusayithi yezentengiso isetshenziswa ngqo kwiHhovisi Likahulumeni Lokufuduka Kwabahulumeni baseHulumeni. UHulumeni waseNdiya akaqokile i-www.india-visa-online.com ngqo, ngokungaqondile noma ngokukhethekile. Imali ekhokhelwayo ikhokhiselwa izinsizakalo zethu kanye ne-Government Visa Levy kulabo abafaka izicelo kule webhusayithi.